एकाबिहानै अमेरिकामा डरलाग्दो गोलीकाण्ड
एजेन्सी । अमेरिकाको दक्षिण भागमा पर्ने क्यालिफोर्निया राज्यमा शनिबार बिहान भएको गोलीकाण्डमा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ ।
काठमडौँ । अमेरिकाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग
एजेन्सी । अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्ने गरी मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक रुपमा नै पत्राचार गरेपछि फ्रान्सले सो निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
एजेन्सी । इरानका सर्वोच्च नेता अयोतुल्लाह अलि खमेनीले यस क्षेत्रमा अशान्ति फैलिनुमा अमेरिकाको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन् ।
के इस्लामिक स्टेटका नेता बग्दादी मारिएकै हुन् त ?
वासिङ्टन । आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेटका नेता अबु बाकर अल–बग्दादी अमेरिकी हवाई कारबाहीमा मारिएको अमेरिकी अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् । विश्वमै सर्वाधिक खोजीको व्यक्तिको सूचीमा रहेका बग्दादी सिरियाको इड्लिबमा अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा मारिएको बताइएको छ ।
एजेन्सी । चीनको विशाल प्रविधि कम्पनी हुवावेको आम्दानीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले हड्डी भाँच्ने चेतावनी दिएपछि अमेरिकाले उठायो कडा कदम
एजेन्सी । हङकङको लोकतन्त्रको समर्थनमा चलिरहेको विरोध प्रदर्शनमा अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टिटिभमा एउटा बिल पास भएको छ ।
'अमेरिकाले आतंकवादविरुद्ध लड्न नयाँ बाटो रोज्नुपर्छ'
एजेन्सी । ९–११ शैली आतंकी आक्रमण महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेरि हुनेछ ? त्यो सम्भावना अस्वीकार भएको छ, तर कसैलाई पक्का छैन कि यो फेरि कहिले हुनेछैन । न कि ह्वाइट हाउस न त अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पीओले हिम्मत गरे वा नचाहने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सक्षम भए।
ह्युस्टन । अमेरिकी कच्चा तेलको आयात र निर्यात दुबै गत साता घटेको अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (इआइए) ले जनाएको छ ।